တစ္လစာေဟာကိန္း . . 1.6.2019 မွ 30.6.2019 အထိ...! - Thadin
Homeေဗဒင္ယၾတာတစ္လစာေဟာကိန္း . . 1.6.2019 မွ 30.6.2019 အထိ…!
June 11, 2019 Kay Kay ေဗဒင္ယၾတာ Comments Off on တစ္လစာေဟာကိန္း . . 1.6.2019 မွ 30.6.2019 အထိ…!
၆လပိုင္းမွာ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပမလိုလိုနဲ႔ အဆင္မေျပျဖစ္တက္တယ္။အခ်စ္ေရးညံ့ေနပါေသးတယ္ အလိမ္ခံရတက္တယ္ အလုပ္ကိစၥေၾကာင့္ေသာ္လည္ေကာင္း အျခားလူမႈေရးကိစၥေၾကာင့္ေသာ္လည္ေကာင္း ခရီးသြားရဖို႔အေၾကာင္းဖန္လာတတ္ပါတယ္။ အမ်ားကိစၥ အလႈကိစၥေတြမွာဝင္ေရာက္ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးရတတ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းစီးပြားအေနနဲ႔က ေရွးတိုးေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။ လုပ္ငန္းထပ္ခ်ဲ႕တာမ်ိဳး ႀကီးက်ယ္စြာေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတာမ်ိဳးမလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။ သတိထားေစခ်င္တာကေတာ့ယာဥ္ကားကို သတိထားေမာင္းႏွင္းပါ။ လွ်ပ္စစ္ကိုင္တြယ္ရာမွာ သတိရွိေစခ်င္ပါတယ္။ ပညာေရးအေနနဲ႔ ဝီရိယထားႀကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္။
ပညာေရးကံကအေကာင္းအဆိုးမွ်ေနတဲ့ သေဘာပါ။ အခ်စ္ေရးကမိမိေမွ်ာ္လင့္ထားသလို မျဖစ္ေသးပါဘူး။ေငြမၿမဲေသးပါဘူး။ေငြအဝင္နည္းပါမယ္
ေရွာင္ရန္-စကားမ်ားမ်ားမေျပာပါနဲ႔ အမွားပါတက္တယ္ ေဆာင္ရန္-စပယ္ပန္းတစ္ကုန္းအိပ္ထဲေဆာင္ထားပါ
၆လပိုင္းမွာ အခ်စ္ေရးေလးေတာ့မဆိုးဘူး ေကာင္းတာမ်ားေနမယ္။အခ်စ္ေရးအသင့္အသင့္ ေငြကုန္က်မ်ားတက္တယ္ သူငယ္ခ်င္းမိသားစုနဲ႔ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရတက္တယ္ ဒီကာလဟာက်န္းမာေရး အားနည္းသြားေစႏိုင္တဲ့ကာလပါ။ အထူးသျဖင့္ အိပ္ေရးပ်က္မခံပါႏွင့္။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေနတတ္ပါတယ္။
ေငြကဝင္ေပမဲ့အဖတ္မတင္ဘဲျပန္ထြက္သြားတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးရႈပ္ေထြးမႈေတြရွိထားပါက ဖံုးကြယ္မရ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ ေနာက္မွေပါက္တဲ့ ေရႊၾကာပင္ကို အေရးေပးေနမိတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးသမားမ်ား ေရာင္းမွားဝယ္မွား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ပညာလိုခ်င္တဲ့စိတ္ ျပင္းျပေနတတ္ပါတယ္။ အိမ္မွာရွိေသာ စက္ကားခဏခဏပ်က္တတ္သည္အတူေနသားသမီးမ်ားရဲ႕ သတင္းေကာင္းေတြၾကားရတတ္ပါတယ္ဗ်ာ။ေငြမခ်ီးပါနဲ႔ ျပန္မရတက္ပါဘူး
ေရွာင္ရန္ အမဲသားမစားပါနဲ႔ ေဆာင္ရန္ ေအာင္သေျပပန္း အိတ္ထဲေဆာင္ထားပါ
ေရွာင္ရန္ အမ်ိဳးေတြနဲ႔ခဏကင္းကင္းေနပါ ေဆာင္ရန္ လမ္းေဘးေခြးအားထမင္းေကြ်းပါ
၆လပိုင္းမွာ အခ်စ္ေရးက ဆိုးလဲမဆိုးဘူးဂေကာင္းလဲမေကာင္းေသးပါဘူး။အခ်စ္ေရးအသင့္အသင့္ သစၥာေဖာက္ခံရတက္သည္ နစ္ေယာက္တြံခံရတက္သည္ ဒီကာလဟာ လြန္စြာမွ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းေတြတိုးပြားမဲ့ကာလပါပဲ။ လုပ္ငန္းစီးပြားေတြလဲ အဆင္ေျပတိုးတတ္ေနပါလိမ့္မယ္။ မိမိလိုအပ္ေနေသာ အကူအညီအား မိဘေတြဆီကေန ရပါလိမ့္မယ္။
စပ္တူရွယ္ယာအလုပ္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ေတြရပါလိမ့္မယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ပက္သက္ေသာအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လက္ေဆာင္ရတတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြေတြရဲ႕ ဝိုင္းဝန္ကူညီမႈေၾကာင့္ အရာရာအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ပါလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူရဲ႕အထင္လြဲစိတ္ေကာက္ေနျခင္းမ်ိဳးၾကံဳရပါလိမ့္မယ္။
ပညာေရးမွာ သင္တန္းအသစ္ေတြတက္ေရာက္ရ ပါလိမ့္မယ္။ က်န္မားေရးအေနနဲ႔ ဗိုက္ေအာက္ဗိုက္နာ ဝမ္းပ်က္တာမ်ိဳးလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။စက္ပစၥည္း ဖုန္း ေပ်ာက္တက္သည္ ကြဲတက္သည္
ေရွာင္ရန္ ရန္ျဖစ္ရတက္သည္သတိထားပါ ေဆာင္ရန္ ေပါက္ေပါက္ဆုပ္ အသီးဘုရားကပ္လွဳပါ
၆လပိုင္းမွာ အခ်စ္ေရးအဆင္ေျပမည္။အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမည္ လာႀကိဳက္ခံရတက္သည္ သတိထားစဥ္းစားပါ ၾကာသပေတးသမီးမ်ား ခရီးသြားရဖို႔အေၾကာင္းဖန္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ မိမိကိုယ္တိုင္ယာဥ္ကားေမာင္းႏွင္ၿပီးသြားတာမ်ိဳး ေရွာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ျခံ၊ ကားဝယ္ဖိုၾကံစည္ထားတယ္ဆိုရင္ ဒီအပတ္ထဲမဝယ္ပါနဲ႔အံုး။
မိမိအိမ္နားမွာ မီးလန္႔တာမ်ိဳးၾကံဳရတယ္ဆိုရင္ ထီထိုးလိုက္ပါလို႔ အၾကံဳျပဳခ်င္ပါတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ မိမိကိုမနာလိုျခင္းေၾကာင့္ ေခ်ာက္တြန္းျခင္း ကုန္းတိုက္ျခင္းေတြလုပ္လာတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းေနပါလိမ့္မယ္။ အခ်စ္သစ္ဆိုတာမ်ိဳးလဲရလာတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးအေပၚ မိမိကိုယ္တိုင္က စိတ္ဝင္စားမႈနည္းေနတတ္ပါတယ္။
ၾကံစည္စိတ္ကူးထားတာေတြလြဲေခ်ာ္ေနရတတ္ပါတယ္။စီးပြားေရး ညံ့ေနတက္သည္ အေရာင္းအဝယ္ပါးေနတက္တယ္ ျဖစ္ေနတာနဲ႔ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ တစ္ထက္ထဲမက်ေသးပါ။ေငြအထြက္မ်ားတက္တယ္
ေရွာင္ရန္ ပိုက္ဆံမခ်ီးပါနဲ႔အလိမ္ခံရတက္တယ္ ေဆာင္ရန္ နင္းဆီပန္းဘုရား ကပ္လွဳပါ
ေရွာင္ရန္ ဆိတိသားမစားပါနဲ႔ ေဆာင္ရန္ ဘုရားမွာေရႊကပ္ပါ ေရသက္ပါယ္ပါ
မိမိအတြက္အက်ိဳးရွိမဲ့ပညာရပ္အသစ္ေတြ စတင္သင္ၾကားျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြေပၚလာတတ္ပါတယ္။ မိသားစုအတူေနသူေတြနဲ႔ ရန္သေဘာေဆာင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြ႕ရပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားကေတာက္ကဆျဖစ္လြယ္တဲ့ကာလပါ။ စီးပြားေရးကံအထူးအားေကာင္းစြာရပ္တည္ေနပါတယ္။
လူငယ္မ်ား အခ်စ္ေရးကံညံ့ေနပါေသးတယ္။ေအာင္သြယ္အားကိုးမွ အဆင္ေျပႏိုင္မဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးပါ။ပစၥည္းေပ်ာက္တက္တယ္ သတိထားပါ
ေရွာင္ရန္ ဝက္သားမစားပါနဲ႔ ေဆာင္ရန္ သံပုရာသီးအိပ္ထဲထည့္ပါ
ေဗဒင္ ထူးျမတ္ေအာင္ – 09760648585
၆လပိုင်းမှာ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေမလိုလိုနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်တက်တယ်။အချစ်ရေးညံ့နေပါသေးတယ် အလိမ်ခံရတက်တယ် အလုပ်ကိစ္စကြောင့်သော်လည်ကောင်း အခြားလူမှုရေးကိစ္စကြောင့်သော်လည်ကောင်း ခရီးသွားရဖို့အကြောင်းဖန်လာတတ်ပါတယ်။ အများကိစ္စ အလှုကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးရတတ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းစီးပွားအနေနဲ့က ရှေးတိုးဆောင်ရွက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ လုပ်ငန်းထပ်ချဲ့တာမျိုး ကြီးကျယ်စွာငွေကြေးရင်းနှီးမြုပ်နှံတာမျိုးမလုပ်စေချင်ပါဘူး။ သတိထားစေချင်တာကတော့ယာဉ်ကားကို သတိထားမောင်းနှင်းပါ။ လျှပ်စစ်ကိုင်တွယ်ရာမှာ သတိရှိစေချင်ပါတယ်။ ပညာရေးအနေနဲ့ ဝီရိယထားကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။
ပညာရေးကံကအကောင်းအဆိုးမျှနေတဲ့ သဘောပါ။ အချစ်ရေးကမိမိမျှော်လင့်ထားသလို မဖြစ်သေးပါဘူး။ငွေမမြဲသေးပါဘူး။ငွေအဝင်နည်းပါမယ်
ရှောင်ရန်-စကားများများမပြောပါနဲ့ အမှားပါတက်တယ် ဆောင်ရန်-စပယ်ပန်းတစ်ကုန်းအိပ်ထဲဆောင်ထားပါ
၆လပိုင်းမှာ အချစ်ရေးလေးတော့မဆိုးဘူး ကောင်းတာများနေမယ်။အချစ်ရေးအသင့်အသင့် ငွေကုန်ကျများတက်တယ် သူငယ်ချင်းမိသားစုနဲ့ စကားများရန်ဖြစ်ရတက်တယ် ဒီကာလဟာကျန်းမာရေး အားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့ကာလပါ။ အထူးသဖြင့် အိပ်ရေးပျက်မခံပါနှင့်။ ငွေကုန်ကြေးကျများနေတတ်ပါတယ်။
ငွေကဝင်ပေမဲ့အဖတ်မတင်ဘဲပြန်ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်များ အိမ်ထောင်ရေးရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိထားပါက ဖုံးကွယ်မရ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာ နောက်မှပေါက်တဲ့ ရွှေကြာပင်ကို အရေးပေးနေမိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးသမားများ ရောင်းမှားဝယ်မှား ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ပညာလိုချင်တဲ့စိတ် ပြင်းပြနေတတ်ပါတယ်။ အိမ်မှာရှိသော စက်ကားခဏခဏပျက်တတ်သည်အတူနေသားသမီးများရဲ့ သတင်းကောင်းတွေကြားရတတ်ပါတယ်ဗျာ။ငွေမချီးပါနဲ့ ပြန်မရတက်ပါဘူး
ရှောင်ရန် အမဲသားမစားပါနဲ့ ဆောင်ရန် အောင်သပြေပန်း အိတ်ထဲဆောင်ထားပါ
၆လပိုင်းမှာ ချစ်သူစီကလက်ဆောင်ရတက်ပါတယ်။ အချစ်ရေးအသင့်သင့် ဒါပေမဲ့ စန်းပွင့်မည့်လဖြစ်သည် ။စနိုက်ကြော်ခံရတက်သည်။အင်္ဂါသားသမီးများ ဒီအပတ်ထဲအလုပ်စီးပွားကံလွန်စွာမြင့်မားနေတတ်ပါသည်။ အလုပ်မှာရာထူးတိုးတာမျိုး နေရာကောင်းရတာမျိုးကြုံရတတ်ပါသည်။ လူကြီးတွေရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းခံရပါလိမ့်မည်။
ဘာသာရေး ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပက်သက်သောကိစ္စများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပေးရတတ်သည်။ ရွှေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေဆီကနေအကူအညီကောင်းတွေရလာတတ်ပါတယ်။ အဝေးရောက်သားသမီးတွေရဲ့ ထောက်ပံ့တာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။
ရှောင်ရန် အမျိုးတွေနဲ့ခဏကင်းကင်းနေပါ ဆောင်ရန် လမ်းဘေးခွေးအားထမင်းကျွေးပါ
၆လပိုင်းမှာ အချစ်ရေးက ဆိုးလဲမဆိုးဘူးဂကောင်းလဲမကောင်းသေးပါဘူး။အချစ်ရေးအသင့်အသင့် သစ္စာဖောက်ခံရတက်သည် နစ်ယောက်တွံခံရတက်သည် ဒီကာလဟာ လွန်စွာမှ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေတိုးပွားမဲ့ကာလပါပဲ။ လုပ်ငန်းစီးပွားတွေလဲ အဆင်ပြေတိုးတတ်နေပါလိမ့်မယ်။ မိမိလိုအပ်နေသော အကူအညီအား မိဘတွေဆီကနေ ရပါလိမ့်မယ်။
စပ်တူရှယ်ယာအလုပ်များမှ အကျိုးအမြတ်တွေရပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ပက်သက်သောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ လက်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ဝိုင်းဝန်ကူညီမှုကြောင့် အရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူရဲ့အထင်လွဲစိတ်ကောက်နေခြင်းမျိုးကြုံရပါလိမ့်မယ်။
ပညာရေးမှာ သင်တန်းအသစ်တွေတက်ရောက်ရ ပါလိမ့်မယ်။ ကျန်မားရေးအနေနဲ့ ဗိုက်အောက်ဗိုက်နာ ဝမ်းပျက်တာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။စက်ပစ္စည်း ဖုန်း ပျောက်တက်သည် ကွဲတက်သည်
ရှောင်ရန် ရန်ဖြစ်ရတက်သည်သတိထားပါ ဆောင်ရန် ပေါက်ပေါက်ဆုပ် အသီးဘုရားကပ်လှုပါ
၆လပိုင်းမှာ အချစ်ရေးအဆင်ပြေမည်။အချစ်ရေးကံကောင်းမည် လာကြိုက်ခံရတက်သည် သတိထားစဉ်းစားပါ ကြာသပတေးသမီးများ ခရီးသွားရဖို့အကြောင်းဖန်လာပြီဆိုရင်တော့ မိမိကိုယ်တိုင်ယာဉ်ကားမောင်းနှင်ပြီးသွားတာမျိုး ရှောင်စေချင်ပါတယ်။ ခြံ၊ ကားဝယ်ဖိုကြံစည်ထားတယ်ဆိုရင် ဒီအပတ်ထဲမဝယ်ပါနဲ့အုံး။
မိမိအိမ်နားမှာ မီးလန့်တာမျိုးကြုံရတယ်ဆိုရင် ထီထိုးလိုက်ပါလို့ အကြုံပြုချင်ပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ မိမိကိုမနာလိုခြင်းကြောင့် ချောက်တွန်းခြင်း ကုန်းတိုက်ခြင်းတွေလုပ်လာတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကံကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ အချစ်သစ်ဆိုတာမျိုးလဲရလာတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးအပေါ် မိမိကိုယ်တိုင်က စိတ်ဝင်စားမှုနည်းနေတတ်ပါတယ်။
ကြံစည်စိတ်ကူးထားတာတွေလွဲချော်နေရတတ်ပါတယ်။စီးပွားရေး ညံ့နေတက်သည် အရောင်းအဝယ်ပါးနေတက်တယ် ဖြစ်နေတာနဲ့ဖြစ်ချင်တာနဲ့ တစ်ထက်ထဲမကျသေးပါ။ငွေအထွက်များတက်တယ်
ရှောင်ရန် ပိုက်ဆံမချီးပါနဲ့အလိမ်ခံရတက်တယ် ဆောင်ရန် နင်းဆီပန်းဘုရား ကပ်လှုပါ
ချစ်သူအချင်းချင်း အိမ်ထောင်ဘက်အချင်းချင်း အထင်လွဲစိတ်ကောက်နေတာမျိုးရှိရင် ဒီကာလမှာ ပြန့်ချော့လို့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ မိမိဟန်ပန်ကို ကြည့်ပြီးအထင်သေးနေသူများ မိမိလုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကြောင့် အံ့သြချီးကျူးသွားတတ်ပါတယ်။ထီပေါက်ကိန်းရှိသည် ရာထူးတိုးတက်သည် ငွေဝင်မည်။ငွေဝင်လာတက်ပါတယါ
ရှောင်ရန် ဆိတိသားမစားပါနဲ့ ဆောင်ရန် ဘုရားမှာရွှေကပ်ပါ ရေသက်ပါယ်ပါ
၆လပိုင်း အချစ်ရေး က ချစ်သူအဟောင်းတွေ ပြန်လာတက်တယ်။အချစ်ရေး ညံ့နေပါသေးတယ် ထင်မထားတဲ့ပြသနာတွေဝင်လာတက်တယ် လုပ်ငန်းသစ်စီးပွားသစ်ဆိုတာမျိုးတွေ ကြုံလာရမဲ့အချိန်ပါပဲ။ စပ်တူလုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကနေ ထူးခြားစွာအကျိုးအမြတ်ရရှိပါလိမ့်မယ်။
မိမိအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ပညာရပ်အသစ်တွေ စတင်သင်ကြားဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတူနေသူတွေနဲ့ ရန်သဘောဆောင်တဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်များကတောက်ကဆဖြစ်လွယ်တဲ့ကာလပါ။ စီးပွားရေးကံအထူးအားကောင်းစွာရပ်တည်နေပါတယ်။
လူငယ်များ အချစ်ရေးကံညံ့နေပါသေးတယ်။အောင်သွယ်အားကိုးမှ အဆင်ပြေနိုင်မဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ပစ္စည်းပျောက်တက်တယ် သတိထားပါ
ရှောင်ရန် ဝက်သားမစားပါနဲ့ ဆောင်ရန် သံပုရာသီးအိပ်ထဲထည့်ပါ
ဗေဒင် ထူးမြတ်အောင် – 09760648585
This Year : 277264
Total views : 2982872